Amerika Atsimo Shily Puerto Varas
Adiresy: sisintany amin'i Chili sy Bolivia;
Faritra: 5,2 km²;
Ny haavon'ny lanitra ambony: 4 300 m.
Ny zavatra voajanahary sasany dia miavaka sy miavaka amin'ny hatsaran-tarehiny. Izany no anaran'ny Lake Laguna Verde, miorina eo amin'ny sisin-tanin'i Chile sy Bolivia. Ny anaran'ny faharoa dia "Farihy maitso", izay nahazo azy noho ny loko maitso maitso maitso.
Laguna Verde - famaritana
Ny Farihin'i Verde Lagoon dia miorina eo atsimoandrefan'ny lemaka Altiplano, eo am-pototry ny volkano Likankabur. Ny haavon'ilay tanàna amin'ny haavon-dranomasina dia 4400 metatra. Ny haavon'ilay tanàna amin'ny haavon-dranomasina dia 5,2 km² misy ny zana-bolana. Ny valan-drano dia manondro ny rano sira, izany dia ahitana singa maromaro: singa metaly vita amin'ny varahina, solifara, arsenika, fitarihana, karbônina kalsioma. Noho ny fifantohana be loatra amin'ireo akora ao anaty rano, dia nahazo loko manokana ny farihy.
Ny lanjan'ny mpizahatany ao Verde Lagoon dia ao anatin'ny tontolo malaza mahavariana manodidina ny dobo. Na dia tsy misy zavamaniry aza, dia mahafinaritra ny tontolo manodidina izay manokatra ny mason'ny mpandeha. Ny fotoana tsara indrindra fitsidihana ny farihy dia ny Aprily-Septambra. Ireo mpizahatany izay niseho tamin'ireny toerana ireny dia afaka mandany fotoana toy izao:
Manana fialan-tsasatra mahafinaritra tsy mahazatra. Ny marina dia tsy misy fasika eny amoron-dranomasina, izay ampiasaina rehetra mba hijerena azy eny amoron-dranomasina. Ny sisin-tany dia vato volkano mainty, ary misy koa ny sira. Miaraka amin'ny loko marevaka misy rano, dia tena mampitolagaga ilay lantihy. Tokony haka akanjo mafana aminao ianao, satria ny rivotra mangatsiaka dia tandindomin-doza ho an'ny toetr'andro;
Mandeha eo am-pototry ny volokano Lincakabur, izay malaza amin'ny endriny tsara tarehy. Manohitra ny fiaviany, afaka manao sary mahavariana ianao. Miakatra eny amin'ny tampony, ianao dia afaka mahita ireo rava sisa tavela tamin'ny tranon'ny Trano fahiny tao amin'ny Incas. Ny fanazavana ho an'ity zava-misy ity dia ny hoe ny volokano dia tsy navitrika nandritra ny 500 taona;
mba hitsidika ireo loharano mafana manakaiky azy, ny hafanana mahatratra 42 ° C. Tena malaza amin'ny ririnina izy ireo, noho ny tsy fitovian'ny rivotra iainana sy ny hafanana amin'ny geysers.
Ahoana ny hahatongavana any Verde Lagoon?
Laguna Verde dia miorina eo akaikin'ny tanànan'i Puerto Varas , izay, indray, dia 17 km miala ny foiben'ny fitantanana any Puerto Montt . Any Puerto Montt dia afaka misidina amin'ny fiaramanidina ianao, ary avy eo dia misy bus na fiara afaka mankany Puerto Varas, avy eo any Laguna Verde.
Mila manapaka ny tongolo ve aho alohan'ny mamboly?
Ann Hathaway tao amin'ny fampisehoana Good Morning America dia nilaza momba ny fitondrana vohoka sy ny reny
Kardinaly famantarana ny Zodiac
Fery amin'ny taolana sy ny tady - ny antony
Divination amin'ny karatra Tarot amin'ny fitiavana
Nitroxoline ho an'ny cystitis
Sarafàna Summer 2016
Puff cake with cheese cottage
Fampandrosoana zaza iray ao anatin'ny 4 volana - inona no tokony ho vitanao?
Ho lasa iconikan'ny fomba amin'ny 60 taona? Mora!
Manicure ho an'ny Taombaovao
Ny dite ginger - recipe
Ny soa azo avy amin'ny anana